Fiarabe fitateram-bahoaka vaovao… : manahy ny mety ho vidin’ny “bus intelligent” ny mpandraharaha mpitatitra | NewsMada
Fiarabe fitateram-bahoaka vaovao… : manahy ny mety ho vidin’ny “bus intelligent” ny mpandraharaha mpitatitra
Par Taratra sur 18/02/2017
Nampahafantarin’ny ministry ny Fitaterana, omaly teny Ambohitsorohitra ny « bus intelligent », fiarabe vaovao, hoe hanatsarana ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Manahy sahady ny amin’ny mety ho vidin’ity fiara vaovao ity anefa ny mpandraharaha mpitatitra.
Mahazaka olona 49 ny fiara vaovao, 23 mipetraka, 26 kosa mitsangana. Mampiavaka ny bus ny fampiasana ny teknolojia vaovao toy ny Wifi, GPS hanaraha-maso ny toerana misy ny fiara sy ny hafainganam-pandeha, ahitana camera ny fiara ka voarakitra ao avokoa ny zavatra mitranga rehetra mandritra ny dia. « Carte » avy hatrany no ahafahan’ny mpandeha miditra ao amin’ny bus fa tsy mikirakira vola intsony sy miandry famerim-bola toy ny mahazatra.
Ny mpamily no mibaiko ny varavarana hidirana sy hivoahana ny fiara. Manaraka ny vanim-potoana ankehitriny ny fiara vaovao.
«Hampihena ny isan’ny fiara mpitatitra olona mivezivezy ny fampidirana ny bus mahazaka olona maro indray miaraka ary hisorohana ny loza samihafa ateraky ny taxi-be », hoy ny filoha, Rajaonarimampianina Hery, omaly nanazava ny tanjona. Raha izany, tsy maintsy hisy ny zotra na kaoperativa am-perinasa eto an-drenivohitra ho voailika. Inona indray no haterak’izany ?
Hisy ny dinika miaraka amin’ny mpandraharaha sy ny mpitantana kaoperativa miasa amin’ny fitaterana eto an-dRenivohitra hametrahana ny laminasa ho an’ireo vonona ny hampiasa ny fiara vaovao.
« Lafim-pihariana manaraka ny vanim-potoana no tanjona amin’ny fametrahana ny fiara vaovao ary tsy hiankina amin’ny tompon’ny fiara taxi-be sy ny mpampily intsony ny mpanjifa fa hahazo vahaolana hafa amin’ny fitaterana », hoy ny minisitry ny Fitaterana, Ramanantsoa Ramarcel. Fanontaniana mipetraka amin’ny fampidirana ny fiarabe vaovao : ny fahateren’ny lalana ampiasaina eto an-dRenivohitra ve hahazaka ny habehan’ny fitaovam-pitaterana ? Tokony hosainin’ny tomponandraikitra izany olana lehibe izany.
Tsy nasaina ny filohan’ny UCTU
Manoloana ny tetikasa vaovao, nilaza ny filohan’ny UCTU ivondronan’ny kaoperativa mitatitra olona eto an-dRenivohitra, Andriambinitsolomora Bernardin, fa tsy nantsoina hanatrika ny fampahafantarana izany ny tenany omaly. Mpikambana telo avy amin’ny UCTU manana fiara maro miasa no nahazo fanasana. Manahy izy amin’ny vidin’ny fiarabe satria mety ho lafo izany satria raha nandeha tany Sina ny tenany, nahatratra 140 tapitrisa Ar ny fiarabe iray. Raha tonga eto mety hitombo ny vidiny. « Hahazaka izany ve ny mpitatitra malagasy ? », hoy izy. Mbola endriky ny fanilihana ankolaka ihany koa izany. Andrasana, araka izany, ny fivorian’ny mpikambana ao amin’ny UCTU, handinihana izany rehetra izany.